भ्यू टावरको ठेक्का रद्द गर्दै काठमाडौं महानगर सम्झौता अनुसार काम नभएको आरोप
२८ असार काठमाडौं । सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म काम अघि नबढाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माता कम्पनीसँगको बोलपत्र रद्द गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माता कम्पनी जलेश्वर विकोई स्वच्छन्दले सम्झौता भएको एकवर्ष पूरा भइसक्दा पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति नगरेको र के भइरहेको छ भनी प्रगति विवरणसमेत नदेखाएपछि ठेक्का रद्द गर्न लागिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । दुई…विस्तृत समाचार »
के तपाई पनि आफ्नो कम्प्युटर रिफ्रेस गरिरहनु हुन्छ, कतै तपाई पनि भ्रममा त हुनुहुन्न ?
तपाई हामी पनि डेस्कटप वा ल्यापटप कम्प्युटर चलाइरहँदा माउसलाई राइट क्लिक गरेर रिफ्रेस गरिरहन्छौ । यो तपाई हाम्रो बानी नै नसिकेको छ । यसबाट हाम्रो कम्प्युटर वा ल्यापटप रिफ्रेस हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । कतिपय मानिस त यो काम लगातार गरिरहन्छन् । तर, के तपाईले सोच्नु भएको छ ? रिफ्रेस गर्दाको असर चाहिँ कस्तो हुन्छ ? १० मध्ये ९ विन्डो प्रयोगकर्ता जमेरै रिफ्रेस गरिरहन्छन्…विस्तृत समाचार »
अमेरिका–उत्तर कोरिया तनाव, कति छ कोरियाको क्षमता, विश्वमा को कति शक्तिशाली ?
वर्षौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उत्तर कोरियाको सैन्य शक्तिलाई कम आँक्दै आएको छ । आईसीबीएम परीक्षण गरेर उत्तर कोरियाले आफू पनि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रभन्दा कम नभएको संकेत भने दिइसकेको छ । अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेको छ कि उत्तर कोरियाले अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक मिसाइल अर्थात आईसीबीएमको परीक्षण गरेको छ। आईसीबीएमको परीक्षण उत्तर कोरियाका लागि ठुलो सफलता हो । यसको अर्थ यो पनि हो कि यो क्षेत्रमा अमेरिककाका सहयोगीसँग उत्तर कोरियाको…विस्तृत समाचार »
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन हुन्छ : गृहमन्त्री शर्मा
२७असार , काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनगर्ने बताएका छन् । सार्कस्तरिय गृहमन्त्रीहरुको सम्मेलनमा भागलिन श्रीलंका जानुपूर्व मंगलवार त्रिभुवन विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री शर्माले सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठनको पहल गरिरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवा आयोग गठनका लागि सवै राजनीतिक दलहरुसँग परामर्शमा रहेको पनि गृहमन्त्री शर्माले बताए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने ५ सदस्यीय आयोगले…विस्तृत समाचार »
​गाडी खरिद प्रकरणमा ओलीले मुख खोले : राष्ट्रपतिलाई विवादमा नल्याउन चेतावनी
२७ असार काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गाडी खरिद प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा नल्याउन चेतावनी दिएका छन् । उनले राष्ट्रपतिले १६ करोड माग गरेको भनेर स्याल हुँइया मच्याइएको आरोप समेत लगाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले गाडी खरिद गर्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई मतलव नै नभएको विषय भएको पनि स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रपतिलाई गाडी उपलब्ध गराउने काम सरकारको भएको भन्दै सरोकारनै नभएको विषयमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा…विस्तृत समाचार »
नहुने भयो संविधान संशोधन, सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा, राजपासँग निर्णायक वार्ता
२७ असार, काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल निर्णयार्थ मतदानमा नलैजाने भएको छ । संविधान संशोधनको पक्षमा राप्रपा विभाजित हुने संकेत पाएपछि दुई तिहाई मत नपुग्ने निष्कर्षका साथ सरकारले विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गर्ने भएको हो । संशोधन विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएपछि मंगलबारबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयको भागबण्डा टुग्याउन कांग्रेस र…विस्तृत समाचार »
भीभीआईपी सान ! राष्ट्रपतिको तलव डेढ लाख विदेश भ्रमणसम्मको खर्च राज्य कोषबाट
यतिबेला राष्ट्र प्रमुखले सवारी साधन माग गरेको विषय हट केक बनेको छ । संसद्देखि सडकसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १६ करोडको गाडी माग गरेको विषयले झनै सामाजिक सञ्जालमा प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ । सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबारको संसद् बैठकमै जवाफ दिनु प-यो राष्ट्रपतिलाई १६ करोडको गाडी दिने निर्णय नभएको भनेर । सोमबार मात्रै अर्को यौटा समाचार भाइरल भयो, दक्षिण अमेरिकी मुलुक उरुग्वेका राष्ट्रपति जोस…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 942 943 944 945 946 Older Last ›